स्वास्थ्य-जीवनशैली , राजनीति
जनतापाटी शुक्रवार, भदौ २७, २०७६, ००:४९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । आज(बिहिबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा डेंगू महामारीबारे चर्काचर्की भएको छ । सांसदहरुदले सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरेर चाँडो समाधान निकाल्न दबाबसमेत दिएका छन् ।
कांग्रेस सांसद संजयकुमार गौतमले स्वाथ्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । उनले डेंगूको यत्रो संकटमा फसिरहँदा पनि रोकथाम गर्न नसकेको र सरकार सुतिरहेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेका छन् ।
‘वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड कता पुग्यो ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।
जनताकाे स्वाथ्यप्रति वेवास्ता
सांसद उमा रेमीले डेंगू समस्या समाधानका सरकारले लागि ठोस कदम नचालेको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन, ‘सरकारलाई जनताका स्वाथ्यप्रति कुनै वास्ता छैन, चासो छैन, संवेदनशिलता छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय यो मेरो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भनेर पन्छिरहेको छ ।’
सरकाले सांसदलाई पनि डेंगु लागेपछि सुन्ने हो कि कहिले सुन्ने हो ?
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेंगूबारे सरकारले आजैबाट काम थाल्न दबाब दिएका छन् ।
उनले भने, ‘नेपालको डेंगूबारे नेपाल सरकार बोल्दैन तर अमेरिका सकारकाले बोलिसक्यो ।’
‘डेंगू मन्त्रीलाई लागिसक्यो, डाक्टरलाई लागिसक्यो, सबैमानिस डेंगुको पीडित भैसके । त्यसैले अब यसबारे सरकाले सांसदलाई पनि डेंगु लागेपछि सुन्ने हो कि कहिले सुन्ने हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै सरकारको धारण माग गरेका छन, ‘त्यसैले म तत्कालै सरकारका तर्फबाट यसको सुनुवाई चाहान्छु, तत्कालै सरकारले यसबारे सुनुवाई गरोस । आजै स्वास्थ्यमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।’
यो प्रकोप हो या महामारी ?
खगराज अधिकारीले डेंगू प्रकोप हो या महामारी ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले यसबारे सरकारलाई प्रष्ट पार्न अनुराधसमेत गरे । उनले भने, ‘यदि महामारी हो भने सरकार र हामी सबै जप्रतिनिधिहरु र राजनीतिक दलले यसबारे जनचेतना अभियान थाल्नुपर्छ । डेंगू विरुद्धको हेल्थ इमरजेन्सी घोषण गरेर तत्कालै काम थाल्नु पर्यो ।’
उनले थपे, ‘प्रकोेप हो भने इपिडियोमोलोजी माहाशाखा के हेरेर बसेको छ ? स्वास्थ्यमन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? यसको तत्कालै समाधान होस् ।’
साथै डेंगु बारेमा अध्ययन गरेर सदनमा यसको जवाफ दिन सभामुख क्रष्णबहादुर महराले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तो छ आज सुनको मूल्य आइतवार, कार्तिक १७, २०७६, ११:१३:००
हङ्‌कङ निर्वाचनः प्रजातन्त्र समर्थक समूहको जित सोमवार, मंसिर ९, २०७६, ०९:३७:००
नेपालले टी–२० सिरिज जित्दै बनायो इतिहास आइतवार, माघ २०, २०७५, १९:०८:००